vol ။ 12 အောကျတိုဘာ, 1910 ။ အမှတ် 1
မီကာလအတွင်းနှင့်လေထုလည်းမရှိတိုင်းကွန်ကရစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ်ထွန်းခြင်းပြီးနောက်။ သဲတစ်စပါးကိုမှသည်မြေမှတစ်ဦး lichen ကနေဧရာမပိတ်ပင်ဖို့, animalculae ကနေလူအား, တိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်က၎င်း၏အထူးသဖြင့်လေထုအတွင်းတည်ရှိသို့ကြွလာအတွင်းက၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်၎င်း၏လေထုထဲသို့ကွယ်ပျောက်၏။
အဆိုပါစကားလုံးအခိုးအငွေ့နှင့် sphaira, နယ်ပယ်အဓိပ်ပာယျ, ဂရိ, atmos မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာမြေကြီးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အခြားအသုံးအနှုန်းဖြစ်သောများအတွက်လူမှုရေးသို့မဟုတ်ကိုယ်ကျင့်တရားဒုတိယအပတျဝနျးကငျြဒြပ်စင်သို့မဟုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ဝန်းရံသောလေထုသတ်မှတ်ဖို့အသုံးပြုဟူသောဝေါဟာရကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအဓိပ္ပါယ်များကဒီမှာအသုံးပြုသောအဖြစ်စကားလုံးတွင်ထည့်သွင်းပေမယ့်အပြင်ကဒီမှာပိုမိုနက်ရှိုင်းအရေးပါမှုနှင့် application တစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးရှိပြီးနေကြသည်။ ယင်း၏န့်အသတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်သွင်းအပြင်, လေထုကြီးမြတ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အသုံးပြုမှုရှိသည်ဖို့လူသိများရပါမည်, ထိုသို့တစ်အဘိဥာဏ်လေထုတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းလေထုနှင့်ဝိညာဏလေထုလည်းရှိသည်ကိုနားလည်ကြရပါမည်။
သူတို့ကရေထဲမှာဒါမှမဟုတ်မြေကြီးပေါ်မှာတည်ရှိသို့ရောက်အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌အသကျရှငျမှုအရာတို့ကို၎င်းရောဂါပိုးသည်လေထုထဲတွင်ရပ်ဆိုင်းမှုအတွက်ကျင်းပကြသည်။ အားလုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှုအရာမှလိုအပ်သောဘဝကနေကြွလာနှင့်လေကြောင်းမှတစ်ဆင့် circulates ။ လေထုမြေ၏ပုံစံများနှင့်မြေကြီးကိုယ်နှိုက်ကအသက်ပေးသည်။ လေထုပင်လယ်ရေ, ရေကန်များ, မြစ်များနှင့် rills အသက်ရှင်ခြင်းကိုပေးတော်မူ၏။ လေထုထဲကနေသစ်တောများ, အသီးအရွက်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်များကိုထောက်ပံ့သောအသက်တာကိုကြွလာ, လူလေထုထဲကနေသူတို့ရဲ့ဘဝကိုရယူထားခြင်း။ လေထုသဘောဆောငျနှင့်ထုတ်လွှင်အလင်းနှင့်အသံအပူနှင့်အအေး, မြေကြီးများ၏ရေမွှေး။ ဒါကြောင့်အတွင်းလေတိုက်နှုန်းသည်ရွာသွန်းလဲမိုဃ်းတိမ်ကိုစီး, လျှပ်စစ်ပြက်တောက်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်မှုတ်မုန်တိုင်းများ precipitated နေကြတယ်, အရောင်များပေါ်လာနှင့်အတွင်းသဘာဝအပေါငျးတို့သဖြစ်စဉ်များအရပျကိုယူပါ။ လေထုအတွင်းအသက်တာနှင့်သေခြင်းလည်းမရှိ။
တိုင်းအရာဝတ္ထုက၎င်း၏လေထုအတွင်း၎င်း၏ဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။ ၎င်း၏လေထုအတွင်းတစ်ဦးချင်းစီအရာဝတ္ထုများ၏ဖြစ်ရပ်လက္ခဏာအရပျကိုယူပါ။ အဆက်ဖြုတ်သို့မဟုတ်ယင်း၏လေထုနှင့်၎င်း၏ဘဝကနေ object ကိုပိတ်ထားသည်၎င်း၏အမှုန်ခွဲခြားပါလိမ့်မယ်နှင့်၎င်း၏တည်ရှိမှုငြိမ်းလိမ့်မည်၎င်း၏ပုံစံကိုပြိုကွဲလိမ့်မယ်, ကစွန့်ခွာမည်ဖြစ်သည်။ မြေကြီးတပြင်လေထုကိုမြေကြီးထဲကနေပယ်ကိုပိတျထားနိုင်လျှင်, သစ်ပင်များနှင့်အပင်သေကြလိမ့်မည်ဟုနှင့်အစားအစာထုတ်လုပ်နိုင်ဘူး, ရေသောက်မသင့်တော်သောလိမ့်မယ်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်လူတို့၏အသက်ရှူဖို့နဲ့သူတို့ကသေမယ်လို့နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
မြေကြီးတပြင်ရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်အသက်တာကို၎င်း၏ပုံစံကိုထိန်းသိမ်းထားနှင့်၎င်း၏ဖြစ်လျက်ရှိသည့်အတွက်မြေကြီးသားတစ်ဦးလေထုရှိသကဲ့သို့, လေထုတစ်ဦးမွေးကင်းစကလေးအဖြစ်လူမွေးသောအရာသို့လည်းမရှိ, မိမိဖြစ်လျက်ရှိကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားသော ။ မိမိအလေထုလူကိုယူကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လျက်ရှိသကဲ့သို့, သူတက်ပေးသည်, ထိုနောက်ဆုံးအရာဖြစ်၏ပထမဦးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျား၏လေထုကအဓိပ္ပါယ်အကြမ်းဖျင်းနှင့်အရည်အသွေးတွေရှိပါတယ်, တစ်ဦးအသတ်မရှိနှင့်မသေချာမရေရာအရေအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအာရုံမှသိမြင်နိုင်သောဖြစ်နိုင်သည်နှင့်စိတ်ကိုသိသည်။ ယောက်ျား၏လေထုမြူသို့မဟုတ်အခိုးအငွေ့တစ်ဖရိုဖရဲအစုလိုက်အပြုံလိုက်တူသောသေချာပေါက်မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့်ဒီဇိုင်းအားဖြင့်လူလုပ်၎င်းတို့၏အထူးမှတ်သားရှိသည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနဲ့ဆက်စပ်နေတာကိုသွားသောသတ္တဝါ၏လေထု, နှင့်ဥပဒေအရသိရသည်။
မိမိအလေထုထဲတွင်ကာယသည်လူက၎င်း၏ပိုကြီးတဲ့လေထု, အမိဝမ်းအတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်၎င်း၏ amnion နှင့် chorionic အတွက်လွှမ်းမိုးနေတဲ့သန္ဓေသားကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းသိမ်းထားသောအားဖြင့်အာဟာရ၏အကြောင်းလေးပုံသုံးပုံသည်သူ၏အသက်ရှုမှတဆင့်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ အသက်ရှုသည်သူ၏အဆုတ်သို့စီးဆင်းရာဓာတ်ငွေ့မျှသာအရေအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ ထွက်သက်တစ်ဦးသန္ဓေသားက၎င်း၏ကျြကွိုးဖွငျ့အမိဝမ်းနှင့်အချင်းမှတဆင့်ထိုအသွေးစီးကနေကျွေးမွေးပြုစုကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အဘိဥာဏ်လေထုထဲကနေကျွေးမွေးပြုစုသောအားဖွငျ့တစ်ဦးအဓိပ္ပါယ်ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
လူသား၏ရုပ်ပိုင်းလေထုထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်အသက်ရှူအားဖွငျ့နှင့်အရေပြား၏အပေါက်မှတဆင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်မှပယ်ချပစ်ထားတဲ့ infinitesimal နှင့်မမြင်ရတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှုန်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ အသက်တော်မှတဆင့်အတွက်ယူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှုန်ခန္ဓာကိုယ်သူတို့နှင့်အတူပေါင်းစပ်ထဲသို့မဝင်ရနှင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုထိန်းသိမ်းရန်။ ဤရွေ့ကားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှုန်အသက်တော်အားဖြင့်စောင်ရေထားနေကြသည်။ သူတို့ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူကိုဝန်းရံနှင့်သူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုတက်ပါစေ။ တစ်ဦးကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုအနံ့နှင့်နံ့သာပေါင်းကိုမှဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်၏သဘောသဘာဝနှင့်အရည်အသွေးဖြစ်သောတစ်ခုအနံ့, ထုတ်လုပ်ပေးသည်။
တယောက်ျား၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလျှင်တစ်ဦးခန်း၌မရေမတွက်နိုင်သောအမှုန်နေရောင်ခြည်၏ရောင်ခြည်များကမြင်နိုင်ဖန်ဆင်းကြောင့်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏အသက်အားဖြင့်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းထားရှိမည်ခံရ, ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုဝိုငျးသို့မဟုတ် whirling ခံရဖို့မြင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့က၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိ, အဆက်အသွယ် IT သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု၏လွယ်ကူစွာထိခိုက်သည်နှင့်အညီ, အဲဒါကိုအဆက်အသွယ်သို့ကြွလာတော်မူသောအခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု၏အမှုန်ထိခိုက်သွားသည်နှင့်နေရာတိုင်းမှာကြောင့်အောက်ပါ, အကြောင်းကိုစက်ဝိုင်းထဲကအဆောတလျင်နှင့်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်သို့ပြန်သွားမြင်ကြလိမ့်မည်ဟု ။ ဒါဟာကူးစက်တတ်သောရောဂါများပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါကူးစက်မှု imparted ဖြစ်ကြောင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု၏အဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်ပေါင်းစည်းမှုဖွငျ့ဖွစျသညျ။ သို့သော်တဦးတည်းရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အထဲ၌တည်ဖို့ငြင်းဆန်အသုံးပြုပုံနှင့်ခုခံတဦး၏ကျန်းမာရေးနှင့်အာဏာအတွက်ယုံကြည်မှုအသုံးပြုပုံအတွင်းနှင့်မရှိဘဲစင်ကြယ်သောကြောင့်စောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်လိုကူးစက်ထဲကနေလုနီးပါးကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။
ယောက်ျား၏အဘိဥာဏ်လေထုစိမ်နှင့်သူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုဝန်းရံ။ အဆိုပါအဘိဥာဏ်လေထုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက်၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်ပိုမိုအားကောင်းနှင့်ပိုပြီးအစွမ်းထက်သည်။ အဆိုပါအဘိဥာဏ်သည်လူသေးဖွဲ့စည်းခဲ့သည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောက်ျား၏ astral ပုံစံခန္ဓာကိုယ်က form မှာကိုယ်စားပြုနေသည်။ ဗဟိုအဖြစ် astral ပုံစံခန္ဓာကိုယ်နှင့်တကွ, အဘိဥာဏ်လေထုကြောင့်နှင့်၎င်း၏တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအချိုးကျနေတဲ့အကွာအဝေးတွေအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်းရံ။ အဲဒါကိုပွင့်လင်းငွေ့သို့မဟုတ်ရေအဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့မြင်စေခဲ့သညျ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုရေထဲမှာအမှုန်ဒါမှမဟုတ်အနည်အနှစ်များကြောင့်အတွင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးယောက်ျား၏အဘိဥာဏ်လေထုက၎င်း၏ပူနှင့်အအေးရေစီးကြောင်း၎င်း၏လှိုင်းတံပိုးများနှင့် undulatory လှုပ်ရှားမှုများကို၎င်း၏ whirlpools နှင့် Eddie ၎င်း၏ပျံ့နှင့် undertow, နှင့်၎င်း၏ဒီရေများမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကျဆုံးခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦးအလင်းဆုံသမုဒ္ဒရာမှနှိုငျးယှဉျနိုငျသညျ။ သမုဒ္ဒရာကမ်းခြေ beats အဖြစ်လူသား၏အဘိဥာဏ်လေထုအစဉ်အဆက်၎င်း၏ astral ပုံစံခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ဆန့်ကျင်ရိုက်နှက်နေသည်။ အဆိုပါအဘိဥာဏ်လေထုကျော်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်နှင့်အာရုံခံစားမှု၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်သည် astral ပုံစံခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝှမ်း surges ။ အဆိုပါစိတ်ခံစားမှု, အလိုဆန္ဒများနှင့်စပ်ဆိုင်သောစိတ်တို့သည်မြင့်တက်နှင့်ဒီရေများကျဆင်းကဲ့သို့အဘိဥာဏ်လေထုကတဆင့်ဖြစ်စေ, ရှင်းလင်းသောသဲဆန့်ကျင်သည်ရေရေမြှုပ်နှင့် Dash နှင့်ပိန်လိုပဲသို့မဟုတ်ယင်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွင်းအားလုံးတ္ထုဆွဲရန်ကြိုးစားနေတစ်ခု undertow သို့မဟုတ် whirlpool တူသောပြုမူ သူ့ဟာသူသို့။ သမုဒ္ဒရာလိုပဲအဘိဥာဏ်လေထုအညစ်နှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဘိဥာဏ်လေထုကိုယ်တိုင်ကအပေါ်သို့ preys နှင့်အခြားသူများသက်ရောက်သည်။ က astral ပုံစံခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သို့သို့မဟုတ်မှတဆင့်သို့မဟုတ်ရေကြီးမှုအတွက်သမုတ်သောအမျှစိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်အာရုံ၌ရှိသမျှသောထုံးစံထုတ်လုပ်နေကြပြီးဤလုပ်ရပ်အထူးသဖြင့်ထိတွေ့၏အဓိပ္ပာယ်ပေါ်အတွင်းပိုင်းထိ။ ဤ action အတွက်အပြင်သွားကြဖို့ impels နှင့်၎င်း၏အရာဝတ္ထုပေါ်တွင်တဦးတည်းဖြင့်သမုတ်သော, သို့မဟုတ်ပါကအချို့သောအရာဝတ္တုတစ်ခုတောငျ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့်အခိုင်ခံ့ undertow ၏အဖြစ်အာရုံကိုထုတ်လုပ်တဲ့မြင့်တက်လှိုင်းများကဲ့သို့ခံစားရ၏။
အဆိုပါ astral ပုံစံခန္ဓာကိုယ်မှတဆင့်ဖြန့်ခြင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတျဝနျးကငျြ, အအဘိဥာဏ်လေထုသိမ်မွေ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသံလိုက်၏ပြောပြီကြောင်း၎င်း၏ features တွေတစ်ဦးအဖြစ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့သဘာဝသံလိုက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အခြားသူများများအတွက်အစွမ်းထက်ဆွဲဆောင်မှုရှိစေခြင်းငှါ။ ယောက်ျား၏အဘိဥာဏ်လေထု၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသံလိုက်မှအချိုးအစားအတွက်သူအဆက်အသွယ်ကြွလာတော်မူသောအတူအခြားသူများအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်၎င်းတို့၏အဘိဥာဏ်လေထုမှတဆင့်တခြားယောက်ျားတွေရဲ့လွယ်ကူစွာထိခိုက်, အရသိရသည်။ လူတစ်ဦး၏ဤအဘိဥာဏ်လေထုကိုနှိုးဆော်တတ်၏နဲ့အခြားသူတစ်ဦး၏သို့မဟုတ်အများအပြားနှင့်ထိုအရပ်၏အဘိဥာဏ်လေထုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်အလောင်းတွေအပေါ်ပြုမူ agitates; နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကြီးစိုးသောအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်စိတ်အားထက်သန်မှု၏သဘောသဘာဝအရသိရသည်ပူပနျခွငျးနေကြသည်။ ဤသည်စကားလုံးများကိုသို့မဟုတ်မည်သည့်မျိုးအရေးယူမှုများအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲတဦးတည်း၏အမျှသာရှိနေခြင်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုနိုင်ပါသည်။ အခြို့သောအမှုတို့ကိုပြုသို့မဟုတ်ပြောလှုံ့ဆျောခံရသို့မဟုတ်သူတို့အဘိဥာဏ်လေထုသို့မဟုတ်သူတို့ကို impels သို့မဟုတ်ဆွဲယူသောတဦးတည်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသံလိုက်ကလွှမ်းမိုးမယ်ဆိုရင်မလိုအခြို့သောစိတ်ခံစားမှုမှစကားရပ်ပေးသောဒါ။ မိမိအအဘိဥာဏ်လေထုသူကအကောင်းဆုံးဖြစ်သိတယ်အဘယ်အရာကိုဆန့်ကျင်သည်အခြားသြဇာသက်ရောက်သည်, သို့မဟုတ်သူအထောက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင်းခံစားရလျှင်, action ကိုစစ်ဆေးပါသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒခံစားရ sanctioning မဟုတ်အားဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုပြောင်းလဲရန်, သူ၏အတွေးကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်စေခြင်းငှါမြင်တော်မူသောတစ်ခုမှာ တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသဘာဝတရား၏အကြောင်းအရာနှင့်ကြောင်းဘာသာရပ်မှတဖြည်းဖြည်းကသူ၏အတွေးကိုင်ထားသည်။ ဘာပဲကြင်နာအားလုံးခံစားမှုနှင့်အာရုံခံစားမှုတဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဘိဥာဏ်လေထုနှင့်အခြားသူများ၏အဘိဥာဏ်လေထုအားဖွငျ့ထုတျလုပျဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များ၏အဘိဥာဏ်လေထုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, လှုံ့ဆော်ဖို့, သူတို့အဆက်အသွယ်သို့ရောက်တော်မူသောသူတို့စိတျဝငျစား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါကပျြောမှေ့စသဘာဝတရား၏ဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားသူများက enervating သို့မဟုတ် deadening သူတို့ဖြည့်ဆည်းတော်မူသောသူတို့အား, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုရေးရာအတွက်အကျိုးစီးပွားကိုဆုံးရှုံးစေ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
အဆိုပါအဘိဥာဏ်လေထုစိတ်ကိုက၎င်း၏ astral ပုံစံခန္ဓာကိုယ်ကနေတဆင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပြုမူသောအလတ်ဖြစ်ပြီး, ကအားလုံးကိုအသိတွေ့ကြုံနှင့်အာရုံစိတ်ကိုမှဆက်သွယ်ထားတဲ့အားဖြင့်အလယ်အလတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဘိဥာဏ်လေထုမရှိရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏င်း၏လက်ရှိပြည်နယ်အတွင်းရှိယောက်ျား၏စိတ်ကိုသတိပြုမိလိမ့်သို့မဟုတ်နှငျ့ဆကျသှယျနှင့်သူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီးအပေါ်ပြုမူနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ယောက်ျား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပစ္စုပ္ပန်ပြည်နယ်ရှိသူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝစဉ်အတွင်းမျှအဓိပ္ပါယ်နှင့်ကောင်းစွာသတ်မှတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ရှိပါတယ်။ သို့သော်ဝန်းရံနှင့်ပေါ်နှင့်သူ၏အဘိဥာဏ်လေထုနှင့်ထွက်သက်မှတဆင့်များနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏အာရုံကြောစင်တာများအားဖွငျ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ထိုအရပ်မှတဆင့်လုပ်ဆောင်ရသောတစ်ဦးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုလည်းမရှိ။ အဆိုပါအဘိဥာဏ်လေထု၏သံလိုက်အရည်အသွေးကိုထံမှခွဲခြားအဖြစ်စိတ်ပိုင်းလေထု, လျှပ်စစ်မီးသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုတစ်နယ်ပယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ လျှပ်စစ်မီးဟာသံလိုက်စက်ကွင်းမှဖြစ်သကဲ့သို့ဒါဟာအဘိဥာဏ်လေထုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဘိဥာဏ်လေထုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုဆွဲဆောင်နှင့်အဘိဥာဏ်လေထုပေါ်နှင့်မှတစ်ဆင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု၏အရေးယူမှုအားဖွငျ့အားလုံးအဘိဥာဏ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်နှင့်သရုပ်ထုတ်လုပ်သို့မဟုတ်အကြောင်းကိုယူဆောင်နေကြသည်။
၎င်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုထဲတွင်ရွေ့လျားစိတ်ကိုခံစားနားလည်တတ်ဘဲ, နှင့်မည်သည့်မျိုးအာရုံခံစားမှုမှဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူးပါဘူး။ ကမှတဆင့်နှင့်အဘိဥာဏ်လေထုနှင့် ဆက်စပ်. ပြုမူခြင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပေါ်နိုင်နှင့်အတွေ့အကြုံများကိုအာရုံခံစားမှုသာအခါ။ ၎င်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုထဲတွင်စိတ်ကိုအတွေးအားဖွငျ့တက်ကြွဖြစ်ပါတယ်။ စိတ္တဇစဉ်းစားတွေးခေါ်ရာတွင်ပါဝင်နေသည်၎င်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုအခါများတွင်သရုပ်ဆောင်စိတ်ကိုအာရုံမှုဖြစ်ပါတယ်။
လေထဲမှာမြေကြီးနှင့်ရေနှင့်အပင်များနှင့်တိရစ္ဆာန်များ၏ဘဝမှလိုအပ်သောဖြစ်သကဲ့သို့အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုလူ့အသက်ကိုရန်အဖြစ်လိုအပ်ပေသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုမရှိဘဲလူ့ဖြစ်လျက်ရှိနေဆဲအသက်ရှင်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူတစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်သာ, တစ်ဦးအရူး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးလူထုံပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူကိုဖြစ်ပေါ်လာကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု၏ဖြစ်ပြီးတိရစ္ဆာန်ထက်ပိုပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းအဘိဥာဏ်လေထုမျှယုံကြည်ချက်ကြောင့်မဟုတ်သလိုကိုယ်ကျင့်တရားစိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုများရှိနေသည်။ ဒါဟာ actuated နှင့်ကြီးစိုးလိုသောဆန္ဒအသုံးပြုပုံနှင့်စာရိတ္တသို့မဟုတ်ညာဘက်မဆိုအယူအဆတွေအားဖြင့်နှောင့်အယှက်များနှင့်မမှားနေသည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဘိဥာဏ်လေထုနှင့် ဆက်စပ်. အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုအဆက်အသွယ်များနှင့်လုပ်ရပ်များသည်ကိုယ်ကျင့်တရားအသိနိုးသောအခါ, အဆိုပါအမှားအမှန်၏စိတ်ကူးစဉ်းစားလုပ်ဆောင်ချက်ဟာနိုးကိုယ်ကျင့်တရားသဘောအရဆန့်ကျင်အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, သည်, ထို့နောက်သြတ္တပ္ပစိတ်တီးတိုး, အမှတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုထဲမှာအတှေးအဒီတုံ့ပြန်ခဲ့လျှင်အဘယ်သူမျှမက, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုဟာ, နှိမျခတျြော calms နှင့်ထိန်းချုပ် လှိုင်းကြီးအဘိဥာဏ်လေထု, နှင့်စဉ်းစားအကျင့်ပျက်လုပ်ရပ်ခွင့်ပြုမထားပေ။ ဒါပေမယ့်အလိုဆန္ဒညာဘက်၏အတွေးထက်တန်ခိုးကြီးသောအခါ, အဘိဥာဏ်လေထုအချိန်ကိုများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုထဲကအပိတ်နှင့်အခွအေနမြေားနှင့်အခြေအနေများကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်အဖြစ်အလိုဆန္ဒအရေးယူထဲသို့သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ဦးလူသား၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုသည်သူ၏အဘိဥာဏ်လေထု၏ထံမှကွဲပြားခြားနားတဲ့ထုံးစံ၌အခြားသူများကိုသာသက်ရောက်သည်။ မိမိအအဘိဥာဏ်လေထု၏အခွားစိတ်ခံစားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်အလိုဆန္ဒတက်ကြွစွာအချက်နှင့်အာရုံခံစားမှုရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်; စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များအားဖြင့်အခြားသူများကိုသာသက်ရောက်သည်, သော်လည်း။ အတှေးအစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များအပေါ်သယ်ဆောင်နေကြသောအချက်များဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအဘိဥာဏ်လေထု၏စစ်ဆင်ရေးစိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြပြီးအာရုံခံစားမှုဖြစ်ပေါ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု၏သူများသည်ပညာတတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အတွေးမှု။ အဆိုပါအဘိဥာဏ်လေထုအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်ပြီး, အဘိဥာဏ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလွှမ်းမိုးနေသည်အခါရလဒ်ကငျြ့တရားဖြစ်ပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်နှင့်၎င်း၏လေထုနှင့်လူသို့မဟုတ်အခြားသူများ၏အဘိဥာဏ်လေထု၏, သူ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုငါ့ကိုနှိုး, လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်စဉ်းစားရန်အခြားသူများကိုအားပေးသူတို့ကိုဆင်ခြင်၏လကျအောကျခံအကြံပြု, ဒါမှမဟုတ်အခြားသူအပေါ်သို့ damper ချပြီး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, ဖိနှိပျ , clouding နှင့်၎င်းတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများထွက် snuffing ။ ဤသည်အစဉ်အမြဲရည်ရွယ်ချက်ကိုပြုမထားပါ။ တဦးတည်းဒါအခြားသူများသက်ရောက်မှု၏အတော်လေးသတိမထားမိဖြစ်နိုင်သည်ထိခိုက်; ဤအဆိုးကျိုးများသူ၏အကြံအစည်၏တန်ခိုးနှင့်သူတို့ကိုအခြားသူတွေ '' စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု၏လွယ်ကူစွာထိခိုက်သည်နှင့်အညီ, မိမိရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ အညီအမျှ၏သူများသည်, ဒါမှမဟုတ်နီးပါးတန်းတူ, အပြုသဘောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုဟာသူတို့ရဲ့စံနမူနာကွဲပြားလျှင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်ဘက်ပြုခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဖို့များပါတယ်။ ထိုသို့သောအတိုက်အခံနိုးနှင့်ထုတ်သို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးစဉ်းစားရန်ပါဝါနှင့် overpowering နှင့်ငြိမ်သက်၏ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်မပါဘူးဆိုရင်ကဖြစ်စေသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုပိုမိုခိုင်မာစေလိမ့်မည်။
အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုသည်သူ၏အဘိဥာဏ်သဘောသဘာဝနှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိရိစ္ဆာန်သည်လူကို၎င်း, တစ်ဦးချင်းဒါမှမဟုတ်ဝိညာဏလူသကြားကအာမခံသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုကတဆင့်လည်ပတ်အကြံအစည်အားဖွငျ့၎င်း၏လှိုင်းလေထန်အဘိဥာဏ်လေထုထဲတွင်အင်အားအလိုဆန္ဒထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူသည်အလိုဆန္ဒများကိုလိမ်မာပါးနပ် operated နေကြသည်သောစုံလငျတူရိယာလုပ်စေခြင်းငှါ, စိတ်ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားနှင့်အပြည့်အဝသတိလုပ် သူ့ဟာသူနှင့်၎င်း၏ကမ္ဘာပေါ်မှာအလုပ်နှင့်မှီစဉ်ဆက်မပြတ်သတိမသေခြင်း။
သူတို့ရဲ့အဘိဥာဏ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုထဲမှာအဘိဥာဏ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောက်ျားမတူဘဲ, သူ့ဝိညာဉ်ရေးရာလေထုထဲတွင်ဝိညာဉ်ရေးရာလူကိုမွဲရှိပါတယ်။ ဒါဟာန့ ်. အဆိုပါအဘိဥာဏ်လေထုနှင့်ဖြစ်တည်မှုသို့ခေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လျက်ရှိ, အခြားအတွင်းနှင့်တဆင့်ချင်းစီနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အဘိဥာဏ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု emanated ဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဏလူသ၏ဝိညာဉျလေထု၏ဤ DEFINITIONS နဲ့မွဲကြောင့်ဖြစ်ပါသည် လေထုသော်လည်းဝိညာဉ်ရေးရာလေထုထဲကနေအတန်ငယ်ကွဲပြားပြီးနောက် patterned နေကြသည်။
စိတ်ကိုအတွေးတစ်ခုဘာသာရပ်အဖြစ်ကစဉ်းစားစေခြင်းငှါ, လူသား၏ဝိညာဉ်ရေးရာလေထု shadowless အလင်းနှင့်မသိခြင်းနှင့်အလင်း၌ဖြစ်သောကြောင့်ရန်ဝိညာဉ်ရေးရာလူသား၏အရောင်နယ်ပယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်အချိုးအစား၏စကားမစပ်တဝိညာဏ၏အောက်ပိုင်းသောအဘို့ကိုအတွင်းအဖြစ်အဆိုပါအဘိဥာဏ်လေထုအတွင်းစိတ်ကျန်းမာရေး, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, လူအပေါင်းတို့၏အနည်အနှစ်များအဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူကိုအတွင်းအဘိဥာဏ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။
ဝိညာဏကိုမစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုကိုလည်းမ clairvoyants အားဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဝိညာဏလေထုဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်စိတ်ထဲကတော့အာရုံ၏အမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. အများဆုံးမကြာခဏစိုးရိမ်သောကြောင့်ထိုသို့များသောအားဖြင့်, စိတ်ကိုအားဖြင့်ဖမ်းမိ, မပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခြင်းဖြင့်ခံစားခဲ့ရသည်မဟုတ်။ ဝိညာဏစဉ်းစားသည်တောင်မှအခါအသိ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဟောပေမယ့်ဝိညာဉ်ရေးရာလူနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာလေထုဟာအာရုံ၏မစိတ်ထဲ၏လှုပ်ရှားမှုများမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဘိဥာဏ်လေထုယောက်ျားဝိညာဏပါဝါကိုနားလည်မဟုတ်သလိုယင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်အနက်ကိုဘော်ပြလို့မရဘူးဒါကြောင့်လှိုင်းလေထန်နှင့်နာမငြိမ်သောကွောငျ့ဝိညာဏလေထုများသောအားဖြင့်လူကိုအားဖြင့်ခံစားခဲ့ရသည်မဟုတ်။ တစ်ခုမှာသူသည်က "ငါ" သေခြင်းသျောလညျးဖြစ်ခြင်းဟာသတိအဖြစ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ခံစားမှုတစ်ခုသို့မဟုတ် prescience ဖြင့်သူ၏ဝိညာဉ်ရေးရာလေထုခံစားရပေမည်။ "ငါ" သေခြင်းထက် သာ. စစ်မှန်သောခံစားရပါလိမ့်မယ်၏သတိဆက်လက်။ တစ်ဦးအားကြီးသောအလိုဆန္ဒရှိတယ်သောအဘိဥာဏ်လေထု, စိတ်ကိုနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းနှင့် "ငါ" ၏ဆက်လက်၏ခံစားချက် misinterprets နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတန်ဖိုးပေးသည် (အကြောင်း, ငါနှင့်မငါဖြစ်၏များ၏ဒြေ၏အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်) ၏အကောင့်တွင် ဆက်ရန်။ စိတ်ကိုဝိညာဏလေထု contemplates သောအခါ, ဝိညာဉ်ရေးရာလေထုငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အသံတိတ်အာဏာနှင့် invulnerability အဖြစ်ဖမ်းမိသည်။ ဝိညာဏလေထုစိတ်ကိုဖို့အာရုံ၏သက်သေသာဓကအားဖြင့်သို့မဟုတ်ယုတ္တိဗေဒအားဖြင့်ထုတ်လုပ်စေခြင်းငှါအရာမဆိုတွေ့ကြုံထက်ပိုမိုထိုင်-နက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်တည်မြဲတဲ့ယုံကြည်ခြင်း, ပေးသည်။ ဝိညာဏလေထု၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှိနေသော်ငြားလည်း, ထိုလူ့ခန်ဓာစိတ်တွင်ယုံကြည်ခြင်း, ယင်း၏မသေခြင်း၏အာမခံချက်ရှိပါတယ်။
ဝိညာဏလေထုကြောင့်တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမော, တစ်ဦးအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့အာဏာနှင့်တစ်ဦးရှိနေခြင်းထုတ်လုပ်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့ unattached နှင့်အဘိဥာဏ်လေထုထဲကနေကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ဝိညာဏလေထု၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင်လူသိများစေသည်အခါစိတ်အဆိုပါ incarnated သောအဘို့ကိုရှည်လျားဝိညာဏလူသစဉ်းစားမထားဘူး , မကွောကျသို့မဟုတ် trepidation မရှိဘဲလူ့စိတ်ကိုအားဖြင့်စဉ်းစားခံရဖို့သိပ်ထူးဆန်း။ ဝိညာဏလေထုသူ့ဟာသူစိတ်ကိုနေဆဲဖြစ်ကြောင်းကိုသိရန်လည်းကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ပါတယ်ယင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်လူသိများစေသည်အခါဒါ။
တစ်ဦးချင်းစီလူအားလျှောက်ထားအဖြစ်လူအနည်းငယ်လေထု၏ဘာသာရပ်ဆင်ခြင်အပ်၏။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ဆက်ဆံရေးကို, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြားအမြင်, စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ဝိညာဉ်သည်လူတို့အကြားရှိရင်းစွဲနှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာလေထုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပြီမဟုတ်။ စိတ်ကိုလေထု၏ဘာသာရပ်နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုကိုယ်တိုင်နှင့်အသိဥာဏ်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျှင်မည်သို့ပင်ဆိုစေ, အသစ်သောလယ်ကွင်းထဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီးသစ်ကိုအလင်းလွှမ်းမိုးမှုအခြားသူတွေအပေါ်တစ်ဦးလူထမ်းယူဆောင်နေကြရသောလမ်းကိုအပေါ်ချခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။ သူနဲ့အခြားသူများကိုအသီးအသီးတွေဖြစ်တဲ့ဆန့်ကျင်နှင့်များစွာသောတဖက်သတ်သဘောသဘာဝ, နှင့်မည်သို့အသီးအသီးအသီးအသီးသဘောသဘာဝကသူ၏လုပ်ရပ်များ၏ယာယီထိန်းချုပ်ရရှိသွားတဲ့ပြီးတော့လာမယ့်အခွင့်မပေးကြပြီအဘယ်ကြောင့်ကျောင်းသားတွေ့လိမ့်မည်။ ယောက်ျား၏လေထု၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့နားလည်မှုမရှိရင်တဦးတည်းကောင်းစွာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘာဝတရား၏အတွင်းပိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်အုပ်ချုပ်အခြေခံဥပဒေများနားလည်မည်မဟုတ်, မသူရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်ထောက်လှမ်းရေး, ဝင်ပေါက်သို့နှင့်ပေးသောသူအားဖြင့်ကမ္ဘာ၏မည်သည့်အတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ဝိုင်းရံထားသည်။ Little ကလေထု၏ဘာသာရပ်၏လူသိများသော်လည်းအဘယ်သူမျှလူလေထုသူ့ကိုနှင့်အခြားသူများအပေါ်ထုတ်လုပ်သည့်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူကျွမ်းတဝင်မရှိသောဖြစ်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးတည်းထိုင်ခြင်းနှင့်အခြား၏အမည်ကိုကြေညာခဲ့သည်လျှင်, ဘွဲ့နာမတော်ကိုတစ်ချိန်က၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ အခြားထဲသို့ဝင်သောအခါဧည့်သည်များ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုသူ့ကိုအားလက်ခံတွေ့ဆုံသူတဦးတည်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမလွှဲမရှောင်တစ်ခုချင်းစီကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုရေးစပ်ထားတဲ့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှုန်၏သဘောသဘာဝ၏တူညီသောသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်သည်နှင့်အညီ, သာယာသောဖြစ်သို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်သည်အရာ, အခြားများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုကြောင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အခြားဆွဲဆောင်သို့မဟုတ်တွန်းလှန်ကြလိမ့်မည် သို့မဟုတ်သူတို့ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကုမ္ပဏီတွင် "အိမ်မှာ" တွန်းလှန်မဟုတ်သလိုဆွဲဆောင်ပေမယ့်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းအရည်အသွေးဒါနီးပါးရောနှောဖြစ်နိုင်သည်။
အခွားသောအချက်များ, သို့သော်, သူတို့ကိုယ်သူတို့စည်းကြပ်။ သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီ၏အဘိဥာဏ်လေထုဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ခု၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုနှင့်အတူသဘောတူဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်ရမည်။ ဒါဟာသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်သည့်အဘိဥာဏ်လေထုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားထိခိုက်စေသည့်အတွက်ထုံးစံအားဖြင့်ခိုင်ခံ့စေ၏သို့မဟုတ်လျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။ လွဲလျှင်အခြားသောအဘိဥာဏ်လေထု၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ယာယီတက်ကြွသည်နှင့်ဘေးဖယ်ခရီးစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုကနေ, တစ်ဦးချင်းစီ၏အဘိဥာဏ်လေထု၏နောက်ခံသဘာဝနှင့်သံလိုက်အရည်အသွေးကိုလည်းမရှိသောအလိုဆန္ဒကနေ, အခြားများ၏နောက်ခံသဘာဝနှင့်အဘိဥာဏ်လေထုကိုအကျိုးသက်ရောက်လတံ့သော ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စေခြင်းငှါကြင်နာစွာနွေးထွေးမှု, ရတာဟာသို့မဟုတ်စိတ်အားထက်သန်၏ feeling, genial, ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း, အမျက်ဒေါသ, ငြူစူခြင်း, နာကြည်းမှု, မုန်းတီးမှုငြူစူသောစိတ်ဒါမှမဟုတ်ကိလေသာမဆိုနှိုးဆော်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးရင်းနှီးစွာလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုသံလိုက်ဘက်ထရီသည် astral ပုံစံခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်အလိုဆန္ဒ၏နိယာမ၏လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ astral ပုံစံခန္ဓာကိုယ်အရာကိစ္စများအားလုံးစိတျအပိုငျးမြားမှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကတဆင့်, ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်လက်နှင့်ကိုယ်ထည်ကနေသံလိုက်လက်ရှိထုတ်ပေးပါတယ်။ အခြားများ၏အဘိဥာဏ်လေထုနှင့်အတူထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တိုက်ခိုက်မှုသို့မဟုတ်ရောစပ်ထားတဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့သို့မဟုတ်ခိုင်မာတဲ့လှိုင်းတံပိုးအတွက်ရွှေ့ဖို့တဦးတည်း၏အဘိဥာဏ်လေထုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ရာနူးညံ့သိမ်မွေ့သို့မဟုတ်ကျန်းမာသန်စွမ်းလျှံကဲ့သို့ဤသည်လက်ရှိလုပ်ရပ်များ။ ဤသည်သူ၏လေထုလက်ခံအခြားနှငျ့ညီညှတျဖြစ်ပါတယ်အထွက်နှုန်းနှင့်အခြားနှင့်အညီသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်လုပ်ရပ်များမှတုံ့ပြန်လျှင်၎င်း, သဘောသဘာဝကတော့အဘိဥာဏ်သည်၎င်း၏မျိုးအတွက်လေထုနှင့်အရည်အသွေးမှဆန့်ကျင်လျှင်, လေထုပြီးတော့လေထုတွေ့ကြံနှစ်ခုအလွန်အမင်းစွဲချက်တင်သောအခါအရေစီးကြောင်းအဖြစ်အလားတူထုံးစံ၌တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနှင့်လုပ်ရပ်တော်မူမည် မုန်တိုင်းရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါလက်ငင်းမှာ, ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အဘိဥာဏ်လေထု၏အစည်းအဝေးအပြီးတစ်ဦးချင်းစီ၏စိတ်ပိုင်းလေထုသူ့ဟာသူပြောဆိုသော, သူတို့၏ဆွေမျိုးအစွမ်းသတ္တိ, တန်ခိုးတော်အတိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုထဲကတစ်ခုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အဘိဥာဏ်လေထုနှင့်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ် အခြား။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အဘိဥာဏ်လေထုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှငျ့ညီညှတျရောက်နေတယ်ဆိုရင်, နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုသူတို့နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်နေလျှင်, ကောင်းသောသဘာဝနိုင်နှင့်သဟဇာတနှစ်ခုအကြားတည်တတ်၏။ ဒါပေမယ့်ပွတ်တိုက်မှု, နေမကောင်း-ခံစားချက်သို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ်စစ်ဆင်ရေးလူနှစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းနှင့်အဘိဥာဏ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုများသည်နှင့်အညီတည်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
တဦးတည်း၏စိတျကိုကောင်းစွာလေ့ကျင့်သည်နှင့်ကောင်းစွာထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်သည်သူ၏အဘိဥာဏ်သဘောသဘာဝရှိပြီးပါကစိတ်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်အခြားများ၏အဘိဥာဏ်လေထုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ မစိတ်ထဲ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဘိဥာဏ်လေထုလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်လျှင်မူကား, နှစ်ခုအဘိဥာဏ်လေထု၏အပြင်းထန်ဆုံးအခြားများ၏အဘိဥာဏ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်လွှမ်းမိုးမည်ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရပ်တည်မှုနှင့်လူမှုရေးအနေအထားနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံ၏အမှုအရာအများစုကိုဂရုစိုက်သည့်အရာဖြစ်ကြ၏လျှင်, သူတို့အများဆုံးအခြားလူတစ်ဦးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမည်ဖြစ်သည်။ သူ impressionable စာနာခြင်းနှင့်အလွယ်တကူစိတ်ခံစားမှုနှင့်အာရုံအားဖြင့်ပြောင်းရွေ့သည်ဆိုပါကသူသည်မျက်နှာသစ်၏အဘိဥာဏ်လေထုအားဖြင့်အထိခိုက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ သူကသရုပ်ဆောင်မတိုင်မီကောင်းစွာတဲ့အရာစဉ်းစားပါလျှင်သူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနှင့်သုတေသနမှပေးထားလျှင်သူသည်မိမိအစိတ်ပိုင်းတန်ခိုးနှင့်မရသူထုတ်လုပ်နိုင်သည်သောစိတျလှုပျရှားစရာအသုံးပြုပုံမဟုတ်သလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ attribute တွေအားဖြင့်လူသည်အလေးချိန်လျှင်, ထို့နောက်သူကပိုပြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့် အခြားများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုကလွှမ်းမိုး။ ကြင်နာ၏တူညီသောအရတဦးတည်း၏အစိတ်ပိုင်းလေထုတွေ့ဆုံမည်နှင့်အခြားသော၏သဘောတူနှင့်၎င်း၏တန်ခိုးတော်အတိုင်းကအခြားလွှမ်းမိုးမှုသို့မဟုတ်ပဲ့ထိန်းပါလိမ့်မည်။ တဦးတည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုအခြားကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့မဖြစ်သင့်ပါလျှင်နှစ်ခုထဲကတစ်ခုနှင့်အတူ concur သို့မဟုတ်လိုက်လျောနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနှစ်ခုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုမဟုတ်လျှင်, အခြားအားဖြင့်ညွှန်ကြားထားပါလိမ့်မည်သည်အထိသို့သော်, ထို့နောက်တစ်ဦးကအတိုက်အခံများနှင့်တစ်ဦးရန်တွေ့ခြင်းရှိလိမ့်မည် ကြင်နာနီးပါးအညီအမျှအရည်အသွေးကိုက်ညီရပါမည်, သို့မဟုတ်အဘိဥာဏ်လေထုသဘောတူညီချက်တားဆီးသူတို့ကိုအလေးသာမှာရှိနေဆဲနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်စေရန်လုံလောက်သောခွန်အားဖြစ်ကြ၏လျှင်။
သာမန်စိတ်ကိုအခြားများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုကတဆင့်တိုက်ရိုက်ပြုမူနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်မှတဆင့်ပြုမူခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုပေါ်မှာမှတဆင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်၎င်း၏အဘိဥာဏ်လေထုအားဖြင့်သွေးဆောင်သည်။ စိတ်ကိုဦးနှောက်သို့ရောက်ရှိနှင့်ပုံစံနှင့်အလိုဆန္ဒ၏သဘောမျိုးခန္ဓာကိုယ်လှုံ့ဆော်ပေး။ အလိုဆန္ဒနှင့်ပုံစံနှင့်အတူစိတ်အရေးယူအသုံးပြုပုံမမြင်ရတဲ့အလင်းတစ်လျှာမျက်ခုံးနှင့်နဖူးအကြားထံမှထွက်စလှေတျတျောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တဦးတည်းစိတ်ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏, စိန်ခေါ်မှုများသို့မဟုတ်နှုတ်ဆက်သည်, မိမိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုမှတစ်ဆင့်အခြားစိတ်, သရုပ်ဆောင်, မိမိကြံစည်အလားတူထုံးစံ၌ပြုမူနှင့်သူ၏နဖူးမှာဘူတာရုံတည်စေ; နှစ်ခုဘူတာအရှင် flash ကိုထွက်ထူထောင်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုမှတစ်ဆင့်မက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိသည်။ စကားများချိတ်ဆက်ရန်သို့မဟုတ်အဆင်ပြေထဲသို့ဘူတာဆောင်ကြဉ်းဖို့အသုံးပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့တန်ခိုးတော်အတိုင်းအသီးအသီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုလွတ်လပ်စွာစကားများ၏အခြားအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
အခြားများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုကိုထိခိုက်ဖို့တစျဦး၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုအဘို့, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကအနီးဖြစ်ရမည်။ တဦးတည်း၏အဘိဥာဏ်လေထုအခြား၏သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ် အကယ်. တစ်ခုချင်းစီကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်မျက်မှောက်သို့မဟုတ်အခြား၏ကြားနာမှုအတွင်းဖြစ်ဘို့, ကများသောအားဖြင့်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါအဘိဥာဏ်လေထုကတဆင့်နှင့်န်းကျင်ပြုမူကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အများအားဖြင့်လိုအပ်နေပါသည်။ အထူးသာဓကအတွက် မှလွဲ. တဦးတည်းရဲ့အဘိဥာဏ်လေထုအခြားများ၏အဘိဥာဏ်လေထုအပေါ်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးမှာပြုမူဖို့လုံလောက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ တဦးတည်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေထုအခြား၏တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုရဲ့အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်အဘို့, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနီးမလိုအပ်ပါဘူး။ မိမိအတှေးအသုံးပြုပုံအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုကိုဆက်သွယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုအတွေးမှတဆင့်အတွက်သွေးဆောင်ခံရနိုငျသို့မဟုတ်အခြားဖို့အကြံပြုတယ်။
အခန်းသို့ကြွလာလျက်လူတစ်ဦး၏ဝိညာဉျလေထုဖြစ်ပေမယ့်ရံဖန်ရံခါသည်တစ်ချိန်ကမှာစိတ်ကိုအားဖြင့်ရိပ်မိပေမည်။ ဒါဟာလူသား၏ဝိညာဉ်ရေးရာလေထုကသူ့စိတ်ကိုအတူထိတွေ့လုံလုံလောက်လောက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သူ၏အဘိဥာဏ်သဘောသဘာဝအခြားအားဖြင့်ခံစားခဲ့ရသို့မဟုတ်ရိပ်မိခံရဖို့ကြောင်းပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးသူ၏အဘိဥာဏ်လေထုနဲ့ထိတွေ့ထဲက၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင်အခြားများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အဘိဥာဏ်လေထုအားဖြင့်ဖမ်းမိခြင်းနှင့်ခံစားခဲ့ရခံရဖို့ဖြစ်ပေါ်စေရန်လုံလောက်ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်သော်လည်း, သူ့ဝိညာဉ်ရေးရာလေထုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ပြီး, ရဲ့အခြားဝိညာဉ်ရေးရာလေထုယူဆောင်စေခြင်းငှါ မိမိအကိုအခြားလေထုနှင့်အတူစပ်လျဉ်းသို့။ ဘယ်အချိန်မှာတဦးတည်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာလေထုကြောင့်လွတ်လပ်စွာသည်သူ၏ဆင်ခြင်ခြင်းပါဝါနှင့်သူ၏အဘိဥာဏ်သဘာဝတရား၏အခြားအပေါ်ပြုမူအသံထွက်နှင့်တစ်ဦးအေးဆေးအနားယူထုတ်လုပ်နှင့်အချိန်ကာလအတွင်းသူ၏ဝိညာဉ်ရေးလေထုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပြီးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အဘိဥာဏ်လေထုလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။
ဤအမှုအလုံးစုံနှင့်အတူသို့မဟုတ်စကားလုံးများကို၏အသုံးပြုမှုကိုမပါဘဲဖြစ်စေပြုမိစေခြင်းငှါ, ထိုလူနှစ်ယောက်၏ဝိညာဉျသဘောသဘာဝကိုဖျောပွမသော်လည်း။ ထိုကိစ္စတွင်ခုနှစ်တွင်ငုပ်လျှိုးနေအစွမ်းသတ္တိ, ယုံကြည်ခြင်း, ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဆက်ရှိနေနှင့်အခြားထွက်သွားကြပြီးမှဒါသြဇာလွှမ်းမိုးမှုတအကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မယ်။ အကယ်. သို့သော်ဝိညာဉ်ရေးရာယောက်ျား၏ဘာသာရပ်၏စကားပြောရပါမည်နှင့်သူ၏ဝိညာဉ်ရေးရာလေထုအားကောင်းနေတဘာသာတရား၏ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးချင်းဝိညာဉ်ရေးရာယောက်ျား၏ဘာသာရပ်အားဖြင့်အခြားများ၏လေထုကိုနှိုးဆှနှင့်လှုံ့ဆော်သင့်ပါတယ်, ထို့နောက်ဒါနှိုးဆော်ခြင်းတဆင်တူရှိသည်မယ်လို့ သူကသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခံခဲ့ရဘယ်သူကိုအားဖြင့်တစ်ဦးအဖြစ်မျှော်မှန်းချက်။ သို့သော်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပြီးဖယ်ရှားခဲ့ကြောင်း, သူ၏ဝိညာဉ်ရေးရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အဘိဥာဏ်လေထု၏တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိနှင့်အခြားဤတစ်ခုချင်းစီ၏လိုက်လျောညီထွေနှင့်အညီ, သူအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်သောမိမိအ၏လေထုအားဖြင့်ပြုမူပါလိမ့်မယ်။ သူ၏ဝိညာဉ်ရေး, မိမိကအခြားလေထုလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်ထားလျှင်, imparted နှင့်လက်ခံခဲ့သည်စိတ်ကူးတွေနိုင်လိမ့်မည် သူ့စိတ်အညီပါလိမ့်မယ်နဲ့သူ့အဘိဥာဏ်လေထုသူတို့နှင့်အတူလိုင်းသို့ဆောင်ခဲ့လိမ့်မည်။ မိမိကြံစည်အယူအဆကိုလက်ခံနေကြသော်လည်း, အခြားလေထုလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်လျှင်မူကား, သူတို့အလေးချိန်ချိန်တွယ်တိုင်းတာနှင့်နည်းစနစ်ကသူ့စိတ်ကိုအားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မည်။ imparted ဝိညာဏပါဝါ၏ဤစက်မှုအနက်ကသူ့စိတ်ကိုမှသူ၏ဝိညာဉ်ရေးရာလေထု၏အရောင်သည်အလင်းကိုထုတ်ကိုပိတျထားပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်သူ၏စိတ်ကိုလုံလောက်အောင်ခိုင်မာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးနှင့်သူ၏အဘိဥာဏ်လေထုထဲကနေသူ၏ဝိညာဉ်ရေးအထဲကကိုပိတျထားအငြင်းပွားမှုများနှင့်ယုတ္တိဗေဒအားဖြင့်မနိုင်, ထို့နောက်မိမိအအဘိဥာဏ်လေထုတစ်ဦးဘာသာရေးစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်သို့နှိုးဆော်ခြင်းပါလိမ့်မည်လျှင်မူကား, စိတ်လှုပ်ရှားမှုကသူ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အထံတော်သို့ imparted ဝိညာဏအလင်းသည်သူ၏အာရုံ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အနက်မည်ဖြစ်ပြီးသူအခြားသူများကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနှင့်ဘာသာရေးအာရုံနှင့်စိတ်ခံစားမှုစိတ်ဓါတ်များကလွှမ်းမိုးကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
လူတို့သညျတစျဦး၏လေထု၏အသီးအသီးအဖြစ်ကြင်နာအတွက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လျှင်, လူနှစ်ယောက်နှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာလေထုရောနှောနေခြင်းသည်ခက်ခဲသည်တစ်ဦးယောက်ျား၏လေထု၏တစ်ဦးချင်းစီအကြားခြားနားချက်များရန်သဘောတူမရှိစေရန်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှသင့်လျော်ဖြစ်လာ တစ်ဦးချင်းစီလေထု၏အခြားနှင့်မဟုတ်လျှင်အရည်အသွေးနှင့်အာဏာသည်အခြားများ၏သက်ဆိုင်ရာလေထုမှချိန်ညှိနေသည်၏။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအပေးအယူများသောအားဖြင့်ယောက်ျားနှင့်၎င်းတို့၏လေထုအကြားကိုဖန်ဆင်းသည်။
နှစ်ခုတစ်ခန်းထဲမှာအတူတူဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးအပေးအယူထိခိုက်သောအခါပေါင်းစပ်သူတို့ရဲ့လေထုအကြားကိုဖန်ဆင်းသည်။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ဝင်ပေါက်မလွှဲမရှောင်ပေါင်းစပ်ပြောင်းလဲပစ်ပါလိမ့်မယ်။ အသစ်အချက်တို့အပေးအယူဖျက်ဆီးဖြစ်စေဝမ်းထဲသို့နှစ်ဦး၏လေထုပစ်, ဒါမှမဟုတ်သူကပိုပြီးအညီအမျှ, ဟန်ချက်ညီမျက်တော်ကိုဖြေတတ်, ဆက်စပ်နှင့်ယောက်ျားနှင့်လေထုတို့အကြားသဘောတူညီချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်သည့်ဒြပ်စင်မိတ်ဆက်ပေးတော်မူမည်။ ခဏတစ်ပြီးနောက်အသစ်တခုပေါင်းစပ်လူသုံးယောက်နှင့်သူတို့၏လေထုအကြားကိုဖန်ဆင်းသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကိုအချက်မိတ်ဆက်ကြောင့်အဲဒီနောက်စတုတ္ထနှင့်ပဉ္စမယောက်ျား၏ဝင်ပေါက်လေထုအကြားအပြောင်းအလဲများနှင့်ကွဲပြားမှုနှင့်အသစ်ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အသီးအသီးအခန်းထဲမှာအရွက်ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်, ယောက်ျားတစ်ဦးပေးသောအရေအတွက်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းသောလေထု၏ပေါင်းစပ်ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ပြီးသစ်တစ်ခုတဦးတည်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒီယေဘုယျလေထု၏ဇာတ်ကောင်လူတို့သညျအသီးအသီး၏လေထု၏တစ်ဦးချင်းစီ၏အရည်အသွေးနှင့်တန်ခိုးတော်အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တသို့မဟုတ်လူအများတို့သည်၏ရှေ့မှောက်တွင်အခန်းနှင့်အိမ်တအိမ်ကအသကျရှငျသို့မဟုတ်တှငျနထေိုငျသို့မဟုတ်ပါကမကြာခဏရှိသည်ဟုသူမြား၏အကြံအစည်များနှင့်အလိုဆန္ဒများ၏ဝိသေသဖြစ်သောတစ်ခုလေထုပေးထားတယျ။ by ဤသည်လေထုနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အကြံနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုဆုံးဖြတ်ရန်၏ခွန်အားအဖြစ်က၎င်း၏နေရာချထား၏ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်အခန်းသို့မဟုတ်အိမျတျောကိုပြံ့နှံ့န; ထိုသို့အခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်အိမ်သူအိမ်သားထဲသို့ဝင်တဲ့သူတဦးတည်းအားဖြင့်ခံစားခဲ့ရသို့မဟုတ်ရိပ်မိနိုင်ပါသည်။
လူတွေစုရုံးရှိရာသောအရပ်ကိုင်း၏အထူးသဖြင့်လေထု, လူများတို့၏အကြံအစည်, အလိုဆန္ဒများနှင့်လုပ်ရပ်များကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့၏သဘောသဘာဝသို့မဟုတ်ဇာတ်ကောင်ရှိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံ, အရက်ဆိုင်များနှင့်ဆေးရုံများ, အကျဉ်းထောင်, အသင်းတော်များ, တရားရုံးအပေါင်းတို့နှင့်တကွအများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ, ရှိသမျှလူတိုင်းခံစားရပေမည်ဖြစ်သောမိမိတို့၏ဝိသေသလေထု, ရှိသည်။ အများဆုံးခိုငျနှင့်သိပ်သည်းပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤလေထု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအနေဖြင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားမဟုတ်, ဒါပေမဲ့သူတို့အဘယ်သူ၏အာရုံအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်နှင့်နိုးများမှာသေူကပိုကောငျးစှာခံစားခဲ့ရသို့မဟုတ်ရိပ်မိပါလိမ့်မည်။
တစ်ဦးကရွာတစ်မြို့, ကြီးမားတဲ့မြို့, ၎င်း၏ပိုင်ထိုက်သောလေထုရှိပါတယ်။ ယင်း၏ဇာတ်ကောင်သိသို့မဟုတ် sensing ပြည်သူ့အရပ်ကို၏လေထုကိုလူများရဲ့လေထုအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်အတိုင်းအထဲကနေပျောက်ထားရှိမည်သို့မဟုတ်ကြောင့်အရပ်သို့သွားရကြသည်။ တဦးတည်းနေတဲ့စစ်မြေပြင်တစ်ခုဘောလုံးကိုမြေပြင်တစ်ပြိုင်ပွဲ-လမ်းကြောင်းတစ်စခန်း-အစည်းအဝေးမြေပြင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးသင်္ချိုင်းကြားခြားနားချက်အားဖြင့်အထင်ကြီးလိမ့်မည်။ မိမိအတွေ့ကြုံမိမိအပေါ်သူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားသောလေထု၏ဆွဲဆောင်မှုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
လူများကမကြာခဏထားတဲ့အရပ်တို့ကိုဝိသေသလေထုရှိသည်သောတစ်ခုတည်းသောသောအရပ်တို့ကိုမရှိကြပေ။ လူသား၏ခြေသည်ရံဖန်ရံခါနင်းထားပြီးဘယ်မှာဒေသခံတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ထိုက်သောလေထုရှိသည်။ , ဂူဝငျသို့မဟုတျမွကွေီး၏အောက်ဆုံးသို့ကိုရှာဖွေကြီးမားသောသစ်တောများအားဖြင့်ကျယ်ပြန့်လွင်ပြင်ကိုကျော်, မိုးနည်းရေရှားသဲကန္တာရကိုဖြတ်ပြီး, မိုဃ်းတိမ်ကိုဖောက်တောင်များတက်ခရီးထွက်ခဲ့ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်မိုင်းသို့ဆင်းသက်တော်မူသောသူကိုတဦးတည်း, တစ်ဦးချင်းစီထိုကဲ့သို့သောနေရာဒေသများက pervaded ကြောင်းသိရကြလိမ့်မည်နှင့် ပတ်လည်တွေကမှားစရာဖြစ်ပါတယ်သဘောသဘာဝအရာတစ်ခုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။ ဤသည်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဟာနေရာဒေသ၏လေထုကနေလူသားရဲ့လေထုမှဆက်သွယ်နေသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့မဟုတ်နိုင်ငံသည်အခြားလူမျိုးတို့နှင့်နိုင်ငံများကနေမတူညီတဲ့အရာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လေထုရှိပါတယ်။ တစ်ဦးကဂျာမန်, ပြင်သစ်, အင်္ဂလိပ်, Hindoo, Chinaman, ဒါမှမဟုတ်အာရပ်, အခြားထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ တဦးတည်းနိုင်ငံသားတစ်ဦးသည်လူကိုအခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့သွားသည့်အခါသူကသူနှင့်အတူသူမွေးဖွားရပ်ကြီးခဲ့သည့်အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ပိုင်ထိုက်သောတစ်ဦးလေထုကိုသယ်ဆောင်။ မိမိအလေထုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထံမှကွဲပြားခြားနားသောအဖြစ်နိုင်ငံရဲ့လူအနေဖြင့်ခံစားခဲ့ရလိမ့်မည်။ ဤသည်မှတ်သားခြားနားချက်သည်မိမိတစ်ဦးချင်းစီသည်သူ၏အမျိုးသားရေးလေထုကြောင့်ထိခိုက်ကြောင့်သူ့ကိုရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့အရာကသူ့နိုင်ငံရဲ့လေထု, ကြောင့်ဖြစ်သည်။
လူမြိုးတစျမြိုး၏ဝိညာဉ်ကိုလေထုကတဆင့်သူ့ဟာသူတငျပွ။ ဒါဟာအမျိုးသားရေးစိတ်ဝိညာဉ်သည်သို့မဟုတ်လေထုဟာမွေးသေးသောကလေးကစိတျစှဲနှင့်ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်မိမိတိုင်းပြည်၏လေထုစိတျစှဲနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်သူ့ဟာသူနှင့်သူငယ်လူငယ်သို့နှင့်အလေ့အထများနှင့်အကောက်ခွန်နှင့်စွဲအဖြစ်ကိုယ်တော်၌ထင်ရှား၏, မွေးမြူရေး၏ဘဝနှင့်ထုံးစံ၌သူ၏ဘူတာရုံအရသိရသည်။ အဆိုပါမွေးကင်းစကလေးပေါ်မှာကြာနှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တစ်ဦးချင်းစီလေထုထဲသို့အမျိုးသားရေးလေထု grafted သိရသည်။ တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းလေထုထဲသို့ဒါကထွင်းထုသို့မဟုတ်အဂတိလိုက်စားမှုဒါမှမဟုတ်အမျိုးသားရေး၏အရောင် "မျိုးချစ်စိတ်" အဖြစ်သူ့ကိုအားဖြင့်ထင်ရှားနေသည်နှင့်ပင်များနှင့်မကြာခဏပြုစေခြင်းငှါအရာအမျိုးသားရေးအလေ့အထများနှင့်သဘောထားတွေကိုခေါ်ဘာအတွက်လည်းထင်ရှားစေခြင်းငှါ, စဉ်းစားတွေးခေါ်၏မိမိထုံးစံအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်၏လေထုထဲတွင်ဘွားသောသူနှင့်ကတှငျနထေိုငျသူမြားကိုသာသက်ရောက်သည်။ သူ၏ဝိညာဉ်ရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အဘိဥာဏ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုယောက်ျား၏ခွန်အားနှင့်အာဏာအရသူအသက်ရှင်တော်မူသည်သောတိုင်းပြည်များ၏လေထုအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်။ သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်လေထုအကြားနှင့်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုးရာသဘောသဘာဝသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ကနေဖြင့်လက်ရှိဆက်ဆံရေးသည်နှင့်အညီ, တစ်တိုင်းပြည်များ၏လေထုခြင်းဖြင့်ဆွဲဆောင်သို့မဟုတ့်ပြီးရှောင်ပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ကိုအများအားဖြင့်အဘယ်သူ၏လေထု၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးနှငျ့ညီညှတျဖြစ်ပါတယ်တဲ့လူမျိုးထဲတွင် incarnates ။ သို့သော်ထိုသို့မကြာခဏအမျိုးသားရေးလေထု၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထံမှအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးစိတ်ကို incarnates ကြောင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကရှုပ်ထွေးသဘာဝဖြစ်ရသော karmic အကြောင်းတရားများ, ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါလူ့ဇာတိအလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်တိုင်းပြည်ထားခဲ့ပါနှင့်သူ၏ကွီးလေထုပိုမိုနှငျ့ညီညှတျဖြစ်လတံ့သောအခြား select လုပ်ပါလိမ့်မယ်သူတဦးတည်း။
တဦးတည်းကိုမည်သို့နှင့်သူ၏တက်အောင်သူနှင့်တွေ့ဆုံလူများအချို့ကြောင့်ထိခိုက်သည်နှင့်မည်သို့ကသူ၏လုပ်ရပ်များနှင့်စကားများနှင့်ရှေ့မှောက်တွင်အခြားသူများကိုထိခိုက်စေ၏သောအရာကိုအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကိုသတိပွုမိခြင်းဖြင့်မိမိအလေထု၏တစ်ဦးချင်းစီ၏သဘောသဘာဝ၏စှာသငျယူနိုငျသညျ။ သူကပျင်းရိသိချင်စိတ်ထဲကမဟုတ်သလိုစမ်းသပ်မှု၏မတ်ေတာရာမှဤအမှုကို, ဒါပေမယ့်သူကကမ်ဘာပျေါတှငျမိမိအလုပ်အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူစေခြင်းငှါအမိန့်ထဲမှာမသငျ့သညျ။ သူက ", စမ်းသပ်မှုများ" ဆိုမှအခြားသူများအားထားမဟုတ်သလိုသူတို့ကသူ၏အသိပေးစာထံမှဖုံးကွယ်မယ်လို့သောအရာရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ သူမဆိုဤကဲ့သို့သောသဘောထားဖြင့်သူ၏နှင့်၎င်းတို့၏လေထုမှတဆင့်အခြားသူများကိုထိခိုက်စေရန်ကြိုးစားခဲ့လျှင်သူသည်မိမိလေ့လာမှုများအတွက်ဝေးတိုးမည်မဟုတ်ပေမယ့်တိမ်နှင့်ရောထွေးသူ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူသူတို့အပျေါမှာကြိုးစားခဲ့ကြပေမည်တုံ့ပြန်နဲ့နှိုးဆော်နှင့်သူ့ကိုမှတဆင့်အကျိုးသက်ရောက်စေမည် သူ့ကိုယ်ပိုင်အဘိဥာဏ်လေထု။
သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်နှင့်သူတို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမဟုတ်သူတစ်ဦးကသူ့ကိုယ်ပိုင်အဘိဥာဏ်လေထုတွင်ဤအင်အားစုများကနှိုးဆော်တံ့သောလူအုပ်စုလေထုစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အလိုဆန္ဒအားဖြင့် pervaded ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှား, အောငျနိုငျနှင့်လူအုပ်ကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်ဘယ်မှာကြီးမားတဲ့လူအုပ်ကြီးမှပယ်ရှားစောင့်ရှောက်သင့်တယ်နဲ့ သူကသမ္မာသတိရှိကြလော့အချိန်လေးအတွက်နောင်တရလိုလုပ်ရပ်တွေကိုကျူးလွန်ဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်သူကလိုက်လျောနှင့်လူအုပ်စုထိန်းချုပ်ထားသောအားဖြင့် Impulses သတင်းပို့သည်နှင့်အညီပြုမူပါဘူးကြောင့်လူအုပ်စုလေထုသူ့ကိုဒဏ်ရာရစေနိုင်ပါတယ်။
လေထု၏လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလူသည်မိမိတစ်ဦးအသိပညာသို့လာရန်အဘို့အဖြစ်ဖြင့်, သူသည်အသီးအသီးကတခြားနှင့်အတူ၎င်းတို့၏သင့်လျော်သောဆက်ဆံရေးသို့မိမိအလေထုဆောင်ကြဉ်းအံ့သောငှါသင့်သည်, သူသည်အနိမ့်နှင့်အမြင့်မားအကြားခြားနားချက်ကိုသိစေခြင်းငှါ, သူသည်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းအားဖြင့်နိမ့်တိုးတက်စေမည်အကြောင်း, နှင့်တစ်ဦးချင်းစီက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာကြီး၌စုံလငျလုပ်ရမည်။
လူသည်တစ်ဦးပင်ရှိသမျှတို့ကိုလှည့်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အညီအမျှတစ်ဦးချင်းစီသည်သူ၏လေထု၏ပြုမူအပေါင်းတို့နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ကောငျးကြိုးအတှကျအတူတကွအလုပ်လုပ်ရမယ်တိုးရန်ရှိသည်မှအဘို့။ အဆိုပါ incarnated စိတျထဲတှငျနှင့်ထောက်လှမ်းရေးသူတို့ကိုမှတဆင့်လေထုနှင့်အလုပ်၏တစ်ဦးချင်းစီ၏သတိဖြစ်သင့်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ action ကိုလိုအပ်ပေသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးယူမှု, အလိုဆန္ဒ, အတွေးအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုနှင့်တဦးတည်းကိုသိသောအရာကိုအတွက်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဝိညာဏလေထုအားဖြင့်အဘိဥာဏ်လေထုကြောင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။
အားလုံးတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆက်စပ်သို့ဆောင်ခဲ့ရမည်တဦးတည်းရဲ့လေထုအဘို့, တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဆက်တိုက်သို့မဟုတ်တစ်ပြိုင်နက်အရေးယူရှိသင့်ပါတယ်။ လေထု၏တစ်ဦးချင်းစီကိုနှိုးဆှအပေါင်းတို့နှင့်ရည်မှတ်အသိပညာသို့မဟုတ်အလင်းမြွက်လိမ့်မယ်အဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကဲ့သို့သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုရှိသင့်ပါသည်။ ပြောပြီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိန့်ခွန်းသို့မဟုတ်စကားလုံးများကိုဆန္ဒအတွေးဆန္ဒဖို့ညှနျကွားခပေးရနဲ့အရေးယူထဲသို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုကိုပဌနာ, လူအပေါင်းတို့၏အသိကျွမ်းခြင်း၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဆက်စပ်မည်, ထိုစကားများကတဆင့်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်အရေးယူသို့အဘိဥာဏ်လေထုကိုသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုအပေါ်ပြုမူပါလိမ့်မယ် အခြားလေထုမှဝိညာဏ။
တစ်ခုကအယူခံဝင်ဖို့နဲ့ invocation ၏တဦးတည်းရဲ့အမြင့်မားဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရှင်အဓိပ္ပာယ်ကိုစဉ်းစားအားဖြင့်၎င်း, မဖြစ်၏သူဝိညာဏကိုယ့်ကိုယ်ကို၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်နက်ရှိုင်းသောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်, စိတ်အားထက်သန်စွာသိခွေငျးငှာအလိုရှိသောအားဖြင့်, သူ့စကားပြောစကားအားဖြင့်ဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးချည်လေထု၏တစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနှငျ့အတူချိတ်ဆက်ကဲ့သို့ပင်အခြားဖို့နှင့်၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်စိတ်ကိုတစ်ဦးချင်းစီ၏အပေါင်းတို့နှင့်ယင်း၏လေထုသတိထားဖြစ်လာနှင့်၎င်း၏မှာသူ့ဟာသူညှိရသောအားဖွငျ့အသီးအသီးပြောပြတယ်သောအရာလည်းမရှိ တစ်ခုချင်းစီကိုလေထုမှသင့်လျော်သောဆက်ဆံရေးမျိုး။ ဤသည်အဘယ်သူမျှမမသေချာမရေရာအရာဖြစ်၏ က verity ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အတွက်စိတ်ချည်တစ်ဦးအဆုံးမှာဖြစ်၏ နောက်ခံတစ်ဦးချင်းစီက "ငါ" အခြားအဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလူ့ခန်ဓာစိတ်ကိုကဖြစ်သောမှာထက်မကအခြားအဆုံးရှိပုံ, ဒါကြောင့်ဝိညာဏအဆုံးလည်းမရှိစိတ်ထင်လျှင်သို့မဟုတ်အခြား, ကအဆုံးရောက်ပါသည်မည်မျှထည့်သွင်းစဉ်းစားမထားဘူး။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၌အဆုံးဝိညာဏအဆုံးကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာရောက်ရှိဖို့နှင့်ကြီးစွန်းစည်းလုံးဖို့လမ်းအတွေးအားဖွငျ့ဖြစ်ပါတယ်။ အတွေးလမ်းကိုသည်မဟုတ်, အတွေးလမ်းကိုမှန်ကန်စေသည်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ကြရသည်။ လမ်းချည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီချည်တစ်လျှောက်ခရီးသွားထင်နှင့်ကတွေ့ရှိကြောင့် inspirits ။ အဆိုပါချည်သူ့ဟာသူသမျှသောလေထုကတဆင့်သတိဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းစဉ်းစားအချုပ်အခြာဖြစ်၏ သတိဖြစ်ခြင်းလမ်းဖွင့်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုစဉ်းစားရန်ဆက်လက်အားဖြင့်နှင့်သတိနိယာမတိုးချဲ့အသုံးပြုပုံကတော့လူ့ခန်ဓာစိတ်သတိနိယာမ၏အခြားအဆုံးမှာကိုယ်နှိုက်ကမသိနှင့်၎င်း၏အဆင့်မြင့်မိမိကိုယ်မိမိမသိဖြစ်လာသည်နှင့်ဆက်လက်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏သင်တန်းအတွက်စှနျးတစျခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။